Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Hindiya » Mizoram -ka Cusub: Meel Dalxiis Joogto ah oo Ammaan leh
Jebinta Wararka Caalamka • dhaqanka • Wararka Dowladda • Warshadaha Warshadaha • Wararka Hindiya • News • Ammaanka • Wakhtiga waarta • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka
Wasaaradda Dalxiiska ee Dowladda Hindiya ayaa ku dhawaaqday in mudnaanta koowaad la siinayo horumarinta gobollada waqooyi -bari ee dalka, gaar ahaan Mizoram.
Marwo Rupinder Brar, Addl. Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Dalxiiska, Dowladda Hindiya, ayaa shalay yiri, “Waa mudnaanta koowaad ee Wasaaradda Dalxiiska in la bilaabo horumarinta dalxiiska ee gobollada waqooyi -bari iyo gaar ahaan Mizoram.”
Waxay intaas ku dartay in wax badan la qaban karo.
Dalxiisku waa soo -saare shaqo oo aad u weyn, waxayna sidoo kale gacan ka geysan doontaa ilaalinta iyo ilaalinta gobolka, ayuu yiri Brar.
Isagoo ka hadlaya webinar -ka “Furitaanka Safarka & Dalxiiska Mizoram; Caqabadaha iyo Diyaargarowga ”oo ay soo qabanqaabiyeen Xiriirka Rugta Ganacsiga & Warshadaha ee India (FICCI), oo ay si wadajir ah ula shaqeeyaan Waaxda Dalxiiska, Xukuumadda Mizoram, Marwo Brar waxay raacisay:“ Wasiirka Dalxiisku wuxuu u soo jeediyay Wasaaradda Duulista Hawada inay ku darto waddooyin badan. meelaha mudnaanta la siinayo iyada oo hoos imanaysa maalgelinta farqiga wax -ku -oolnimada iyo Mizoram ayaa qayb muhiim ah ka noqon doonta istiraatiijiyaddaas. Barnaamijka Swadesh Darshan, mashaariic badan ayaa lagu fulinayaa si loo hagaajiyo kaabayaasha dalxiiska. Iyada oo la raacayo PRASAD, Wasiirku wuxuu ansixiyay mashaariic badan oo laga soo ogaaday dhinaca xajka. ”
Marwo Brar oo sii hadlaysa ayaa sheegtay in joogitaanka guriga iyo dhisidda awoodda ay yihiin qaybo ay tahay in laga shaqeeyo maadaama ay ku darsanayso cabbirro badan oo dhaqan-dhaqaale marka la eego sii haysashada shaqaale xirfad leh si ay uga shaqeeyaan magaalooyinka ay ku nool yihiin. “Dalxiisayaasha, nooca barashada waayo -aragnimada ah ee qofku ku helo la -joogista qoyska deegaanka waa mid aad u weyn. Wacyi -gelinta iyo dhiirrigelinta ayaa qayb muhiim ah ka ah istaraatiijiyadda gobolka waqooyi -bari si loo muujiyo aqoonsiyada gaarka ah ee siddeedda gobol ee waqooyi -bari iyo sidii si aan kala go ’lahayn loogu dhex -gelin lahaa khibradda safarka ee dalxiiska ee gobollada oo dhan,” ayay raacisay.
“Wasaaradda Dalxiiska waxaa si buuxda uga go’an inay ka shaqeyso kor u qaadista Safarka, Dalxiiska iyo Soo -dhoweynta Gobolka. Wasaaraddu waxay abuurtay kooxo shaqo oo leh wershadaha, waxaanan ka codsanaynaa FICCI inay kala shaqayso Wasaaradda inay u abuurto gobolka waqooyi -bari kooxo shaqaynaya oo wax -ku -ool ah si aan isbeddel ugu samaynno dhawrka bilood ee soo socda. Wasaaradda iyo Dalxiiska Mizoram wuxuu u baahan yahay inuu si daacadnimo leh uga shaqeeyo horumarinta meelaha loo socdo iyo istiraatiijiyad guud wax badan ayaa lagu gaari karaa, ”ayay xustay.
Marwo K. Lalrinzuali, Xoghayaha, Waaxda Dalxiiska, Xukuumadda Mizoram ayaa tiri: “Faafida ayaa keentay isbadal ku yimid suuqa dalxiiska waxaana soo baxaya isbedel cusub kaas oo xoogga saaraya amniga, wacyiga caafimaadka iyo joogtaynta. Caqabadahayaga degdegga ah ayaa ah inaan qaadno hab wax ku ool ah oo horusocod ah oo ku aaddan dib -u -furista iyo helidda kalsoonida dadka si tartiib -tartiib ah dib loogu bilaabo safarka. Waa inaan xaqiijinnaa in caafimaadka iyo badbaadada socotadayadu ay ahaadaan mudnaanta koowaad. Laakiin waa inaan xusuusnaano inaanan awood u lahayn inaan nafteena iska xirno si aan xad lahayn cabsida fayraska corona. Waa inaan si firfircoon isugu daynaa inaan maareyno xaaladda oo aan la shaqeyno la-hawlgalayaasha warshadaha isku fikirka ah iyo daneeyayaasha si aan u xoojinno mowqifkeenna. ”
Dalxiiska Mizoram wuxuu qorsheynayaa inuu qabsado fursadahaan waxaanan diiradda saareynay dhinacyada amniga iyo joogtaynta. “Waxaan dhowaan soo bandhignay Mizoram Siyaasadda Dalxiiska Mas'uul ka ah 2020 si loo wado geedi socodkeenna dib -u -soo -kabashada iyo soo -kabashada. Aragtidayadu waa in aan Mizoram ka dhigno meel sare oo ammaan ah oo joogto ah oo loo dalxiis tago ee waddanka oo dhan. Waxaan qorsheyneynaa inaan ku jirno liiska baaldiga qof kasta oo socotada ah oo deegaan ahaan miyir qaba oo raadinaya xulashooyin safar oo badbaado leh oo waara, ”ayay raacisay Ms. Lalrinzuali.
Mr. Saitluanga, Agaasimaha Wadajirka, Waaxda Dalxiiska, Xukuumadda Mizoram ayaa sheegay in dowladda Mizoram ay soo saartay siyaasadaha, xeerarka iyo tilmaamaha soo socda si waaxda dalxiiska ee Gobolka ay u horumarto khadadka caafimaadka qaba:
1. Siyaasadda Dalxiiska Masuuliyadda Mizoram 2020
2. Diiwaangelinta Mizoram ee Xeerarka Ganacsiga Dalxiiska 2020
3. Xeerarka Mizoram (Aero-sports) 2020
4. Xeerarka Mizoram (Rafting River) 2020
5. Tilmaamaha Qolalka Jiifka/Guryaha ee Mizoram
6. Tilmaamaha Guryaha ee Mizoram
7. Tilmaamaha Hawl -wadeennada Dalxiiska ee Mizoram
8. Tilmaamaha Ticketting Agent Sales/Agent Travel in Mizoram
9. Tilmaamaha Tilmaamaha Dalxiiska ee Mizoram
10. Tilmaamaha Dalxiiska Safarka ee Mizoram
11. Tilmaamaha aqoonsiga Ururka Bixiyeyaasha Adeegga Dalxiiska ee Mizoram.
Mudane Ashish Kumar, Isuduwaha, Socdaalka FICCI, Teknolojiyadda & Guddiga Dijital ah iyo Wada-hawlgalaha Maareynta, Agnitio Consulting, ayaa dhexdhexaadiyay webinar-ka iyo dood-wadareedka “Fursadaha Dalxiiska ee Mizoram iyo baratakoollada badbaadada ee ay qaateen daneeyayaasha.”
Mr. V. Lalengmawia, Agaasimaha, Waaxda Dalxiiska, Xukuumadda Mizoram, ayaa yiri: “Aizawl waa magaalo casri ah oo si fiican isugu xiran. Mizoram waxay leedahay dhul -beereed cagaaran oo aad u badan, kaymo cagaar ah, meelo badan oo bamboo ah, oo ay ka buuxaan duur -joog, biyo -dhacyo iyo dhaqan. Waxaa jiray maqnaansho ku saabsan suuragalnimada dalxiiska ee Mizoram, laakiin gobolka lama taabto, lama sahamin wuxuuna ka qarsoon yahay dalxiiska ballaaran oo leh quudhin aan xad lahayn. Dawladdu waa janno aan la daahfurin sidaas darteedna sumadda summada 'Mizoram Mystical; Janno qof walba u taal. ' Macluumaadka ayaa muhiim u ah kor u qaadista dalxiiska ee gobolka iyo warbaahinta bulshada ayaa aad waxtar u leh in la gaaro dhagaystayaasha ballaaran. Teknolojiyadda dhijitaalka ah ayaa sii wadi doonta inay door aad u muhiim ah ka qaadato dhiirrigelinta dalxiiska. ”
Kaabayaasha dalxiiska ee Mizoram ayaa la xayiray sababtuna tahay miisaaniyad yar oo dalxiis oo ku dhow siddeed illaa toban rupees. Iyada oo maalgelin ka heleysa Wasaaradda Dalxiiska, DoNER iyo NEC, Mizoram wuxuu awooday in uu ku talaabsado horumar iyo dallacsiin. Iyada oo la kaashanayo Wasaaradda Dalxiiska, iyada oo la raacayo qorshaha Swadesh Darshan waxaa la hirgeliyey mashaariic casri ah oo badan sida Dalxiiska Golf-ka iyo Dalxiiska Fayoobaanta ee Thenzawl, Dalxiiska Dalxiiska ee Reiek, Muthi, Hmuifang, ciyaaraha aero ee Tuirial iyo Serchhip . Xayiraadda Wasaaradda ee horumarinta xarunta shirarka Aizawl ayaa gobolka gaarsiin doonta heerka xiga ee dalxiiska MICE. Iyada oo qayb ka ah hindisaha dalxiiska ee masuulka ah, dalxiiska Mizoram wuxuu ka bilaabay mashaariic tijaabo ah laba tuulo oo ah kuwo ku habboon deegaanka oo waara.
Mr. Prashant Pitti, Aasaasaha & Agaasimaha Fulinta, EaseMyTrip; Marwo Vineeta Dixit, Siyaasadda Madaxa-Guud & Xiriirka Dawladda- Hindiya & Koonfurta Aasiya, Airbnb; Mr. Joe RZ Thanga, Xoghayaha Guud, Ururka Hawl -wadeennada Dalxiiska ee Mizoram; Mr. Vanlalzarzova, Xoghayaha Guud, Ururka Wakiilada Safarka ee Mizoram, Mr. Himangshu Baruah, Maamulaha Guud, Dalxiiska Finderbridge, Guwahati; iyo Mr. Jayanta Das, Maareeyaha Guud ee Kutlada Waqooyi-Bari, Darjeeling iyo Maareeyaha Guud, Vivanta Guwahati ayaa iyaguna aragtidooda la wadaagay intii lagu jiray webinar-ka.